​मलेसियामा छोरो केटीसँग लागेर पैसा पनि सक्यो अब कहिल्यै फर्किंदैन भन्छन के गरौं ?
Tue, Mar 20, 2018 | 08:04:33 NST
13:51 PM (4 months ago)
काठमाडौं, कात्तिक २६ – त्यतिबेला अरुणकुमार साह काठमाडौंमा लेबरको काम गर्दै थिए । घर बनाउने काम गर्ने छोराले दिन नखोजेका हुन् कि कमाइ नै नभएको हो थाहा भएन । तर घर अरुणकुमारले एक रुपैयाँ पनि दिएनन् । त्यसैले सुनसरीको मधुवन–७ का हरिनारायण साह आफैंले कान्छो छोरालाई विदेश जान सुल्लाह दिनुभयो ।
एसएलसी पास गरेर कामका लागि काठमाडौं छिरेका अरुणले पढाइलाई निरन्तरता दिन सकेका थिएनन् । त्यसैले बुवाले भनेकै कुरातिर लागे । घर फर्किए । हरिनारायणले अरुणको पनि बिहे गरिदिनुभयो । १ वर्ष पनि नपुग्दै उहाँ विदेश जाने तयारीमा लाग्नुभयो । विदेश पठाइदिने कोही चिनेका थिएनन् उनले ।
त्यसैले काठमाडौंको मौघाल इन्टरनेशनल सर्भिस प्रालिमा पुग्नुभयो । म्यानपावरले उहाँलाई एक लाख ५ हजार रुपैयाँ लिएर मलेसिया पठायो । प्रोडक्सन अपरेटर पदका लागि मलेसिया उडेका अरुणले ३ वर्ष बस्दा झण्डै अढाई लाख रुपैयाँ पठाए ।
छोराले राम्ररी पैसा कमायो भने जग्गा जोड्नुपर्ला भन्ने उहाँले सोच्नुभएको थियो । तर अरुणले जग्गा जोड्ने गरी पैसा कमाउन सकेनन् ३ वर्षमा । उनले त्यतिबेला पठाएको अढाई लाख रुपैयाँ अहिले उनकै छोराको पढाइमा खर्च गर्दै हुनुहुन्छ हरिनारायण साह । ३ वर्षमा बिदा लिएर घर आएका अरुण ३५ दिन बसे अनि फेरि फर्किए ।
घर आएर फर्किएपछि भने अरुणको व्यावहार पनि फेरियो । पहिले दुई तीन महिनामा २०÷३० हजार रुपैयाँ भएपनि पठाउने छोराले पैसा पठाउन छोडे । पैसा आउन त रोकियो नै फोन पनि गर्न छोडे अरुणले । एक महिना, दुई महिना हुँदै ७ महिना पुग्दा पनि छोराले फोन नगरेपछि अरुणकी श्रीमती सीतादेवी आफैं काठमाडौंको म्यानपावरमा आउनुभयो ।
म्यानपावरले अरुणलाई फोन ग¥यो । उनले एक महिनाभित्रै घर आउने भन्दै ११ हजार रुपैयाँ पठाइदिए । सीतादेवी श्रीमानले पठाएको ११ हजार रुपैयाँ लिएर घर फर्किन् । तर एक महिना होइन १ वर्ष भइसक्दा पनि अरुण फर्किएका छैनन् । अहिले त उनको फोन पनि लाग्दैन ।
फोन नलागेर तनावमा परेको परिवारलाई मलेसियाबाटै फर्किने अरुणका गाउँका साथीहरुले सुनाउने खबरले भने झनै सताएको छ । मलेसियाबाट फर्किनेहरुले अरुण त्यहीँ काम गर्ने केटीसँग लागेको र कमाएको पैसा पनि त्यहीँ सक्ने गरेको सुनाएपछि परिवार चिन्तामा परेको हो ।
त्यति मात्रै होइन हरिनारायण साहलाई अरुणका साथीहरुले यसरी केटीसँग फसेको मान्छे कहिल्यै फर्किन सक्दैन पनि भन्छन् । ‘छोरो केटीसँग लागेर पैसा पनि सक्यो अब आउँदैन भन्छन कसरी फर्काउँ’ हरिनारायण भन्नुहुन्छ ।
छोराका पछिल्ला व्यवहार हेर्दा उनका साथीहरुले सुनाएका कुरा ठिक हुन जस्तो लाग्छ हरिनारायणलाई । उतिबेला आफैले विदेश जान सुझाव दिएका छोरा अहिले नराम्रो बाटो लागेपछि हरिनारायणलाई पछुतो पनि लाग्छ । ‘त्यतिबेला बरु यतै केही गर्न लगाउनुपर्ने रैछ जस्तो लाग्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
७२ वर्षका हरिनारायण व्यावहार त जेठो छोरासँग मिलेर जेनतेन चलाउँदै हुनुहुन्छ । तर पनि छोराले बाटो बिराउँदा बुहारी र पाँच वर्षका नातिले आउँदा दिनमा दुःख पाउँछन कि भन्नेमा चिन्तित हुनुहुन्छ ।
छोराका साथीहरुले नराम्रो लतमा फसेकाले अब कहिल्यै फर्किंदैन भनेपनि हरिनारायणको मन मान्दैन । त्यसैले उहाँ अरुणलाई खोज्ने अनि घर फर्काउन सघाउने संस्थाहरुमा पनि पुग्दै हुनुहुन्छ । उहाँले सुनसरीमा रहेको सुरक्षित आप्रवासन सूचना तथा परामर्श केन्द्रमा पनि निवेदन दिनुभएको छ ।
यसरी खोजी गर्दा विदेशमा वर्षौंदेखि हराएकाहरु सम्पर्कमा आएको अनि घर फर्किएका समाचार सुन्नुभएको छ उहाँले । त्यसैले छोरो पनि फर्किन्छ भन्नेमा उहाँ मात्रै होइन अरुणको परिवार आशावादी छ ।
(सुरक्षित आप्रवासन सूचना तथा परामर्श केन्द्र, सुनसरीको सहयोगमा)
मलेसियाको सडकमा बेवारिस भेटिएका रामबहादुरको परिवार भेटिएन
उनलाई नेपाल फर्काउन पहल गरिरहेका छन् । तर घर ठेगाना पत्ता लाग्न सकेको छैन । उनी कम्पनीको नाम र आफ्नो पासपोर्टको विवरण समेत बताउन सक्दैनन् । उनको साथमा परिचय खुल्ने कागजात पनि छैन ।
​पत्रकार महासंघ युएई शाखाका पूर्व अध्यक्ष कोइरालाले नक्कली कामदार मागपत्र बनाएर ठगेको खुलासा
उज्यालो अनलाइनसँग कुरागर्दै कोइरालाले भने ‘काम गर्ने क्रममा गल्ती भयो, दुईदिनमा हिसाब क्लियर गर्छु समाचार नलेखिदिनुहोला ।’ कोइरालाले पैसा फिर्ता गर्छु भनेको दुई दिन वितिसकेको छ । तर अहिलेसम्म कसैले पनि पैसा फिर्ता गरेका छैनन ।
भोग्नेको नजरबाट विदेशमा ब्युटिपार्लरको काम (भिडियो)
अहिले परिवारको बुझाइ फेरिएको छ । ‘काम हेरेर अनि काम गर्ने ठाउँ हेरेर हुन्छ राम्रो नराम्रो पनि’ निरु थप्नुहुन्छ ‘अनि बिग्रिने नबिग्रिने आफैंमा पनि भर पर्छ ।’महिलाहरु असुरक्षित हुन्छन भन्ने चिन्ता पनि त हो नै हैन र ? प्रश्न सुनेपछि निरुले आफैंले काम गर्ने ठाउँको उदाहरण दिनुभयो ।
भात मात्र पाक्ने रेमको होटलमा रुक्मांगद पनि पुगे
त्यसै त भिड छ, स्वाद त खानामै छ नि बोर्ड किन चाहियो,’ रेमबहादुरले हाँस्दै भन्नुभयो । खाना मिठो भएपछि त एक मुखले अर्को मुखलाई तान्छ । काम राम्रो भए प्रचार चाहिदैन । उहाँको आशय यही थियो ।